I-Bollywood - Inkcazo ye-India Industry Movie
I-TV kunye neFilimu Ngamazwe ngamazwe
Icandelo le-Movie ye-India eyaziwayo njenge-Bollywood
I-capital capital yehlabathi ayikho i-Hollywood kodwa i-Bollywood. I-Bollywood yiyona nickname yecandelo lefilimu yase-Indiya e-Bombay (ngoku eyaziwa ngokuba yi-Mumbai, nangona i-Mollywood ingabanjwa.)
AmaNdiya athande ama-movie, nangona ezininzi iifilimu zilandela ifomathi efanayo ebizwa ngokuba yi-masala (igama lokuqokelela iziqholo). Iifilimu zide ezintathu ukuya kwiine iiyure ezide (kwaye zibandakanya ukungena), zibandakanya ezininzi iingoma kunye nemidaniso (equkethe abadlali be-100) okanye iinkwenkwezi eziphezulu, ibali phakathi kweengoma zenkwenkwe zidibana nentombazana (ngaphandle kokumanga okanye ukuxhatshazwa ngokwesondo), amaninzi amanyathelo (nangona kungekho kuchitheka igazi), kwaye rhoqo - isiphelo esonwabileyo.
Izigidi ezilishumi elinesinesine eziya kumaNdiya ziya kwiifilimu imihla ngemihla (malunga ne-1.4% yabemi bhiliyoni 1) kwaye zihlawule umlinganiso wemini yemihla yase-Indiya (US $ 1-3) ukuze ubone nayiphi na ifilimu ezingaphezu kwe-800 ezikhutshwe yi-Bollywood ngonyaka nganye. Oku ngaphezu kwembini inani leemiboniso eziveliswa e-United States.
Nangona iifilimu ezenziwe ngamaMelika ziye zafika eIndiya, kuphela i-Titanic ye-blockbuster yenze i-India iqhosha elinesibini. Iifilimu ezilikhulu namashumi amahlanu e-US zafika e-Indiya ngo-1998. Nangona kunjalo, iifilimu zase-Indiya ziye zaba yinto engapheliyo.
Iifilimu ze-Bollywood ziboniswa kwiimidlalo zaseMelika naseBrithani ngokuphindaphindiweyo. Le midlalo yecandelo leemidlalo liye yaba yindawo yoluntu kwimimandla yaseMzantsi Afrika ehlabathini lonke. Nangona ihlukaniswe ngumgama omkhulu ukusuka ekhaya, abantu baseMzantsi Asiya baye bafumana amafilimu e-Bollywood ukuba yindlela enhle yokuhlala edibaniselana nenkcubeko kunye nabo baseMzantsi Afrika baseMzantsi Afrika.
Ekubeni i-Indiya lizwe leelwimi ezilishumi elinesibhozo ezisemthethweni kunye neelwimi ezingamashumi amabini anesine ezithethwa ngabantu abangaphezu kwesigidi ngasinye, ezinye iindawo zecandelo lefilimu ziyahlukana. Ngoxa i-Mumbai (i-Bollywood) ikhokela iIndiya kwimveliso yefilimu, i-specialty yayo inamabhayisikobho ase-Hindi. I-Chennai (eyayisakuba yiDadras) ivelisa iifilimi eTamil naseKolkata (eyayisakuba yiCalcutta) yinkunzi yebhantshi yaseBangali.
Lahore yasePakistan yaseLahore ibibiza ngokuba yiLollywood.
Isikhungo sokuvelisa ifilimu ye-Bollywood iyindawo yesadiyo esekelwe nguRhulumente eyaziwa ngokuba yi "Film City" kumantla aseNyakatho yaseMumbai. I-Bollywood ibonisa ukuqala kwayo ukuya ngo-1911 xa i-Indian yokuqala yokugcina ifilimu ikhutshwe ngu-DP Phalke. IShishini liqhutywe kwaye namhlanje kukho iindidi ezingama-250 e-Mumbai kuphela.
Ienkwenkwezi ze-Bollywood zithandwa kwaye zihlawulwa kakhulu, ziqwalasela uhlahlo lwabiwo-mali. Inkwenkwezi ehamba phambili kwifilimu ifumana i-40% ye-US $ 2 yezigidi zebhajethi yefilimu yama-masala. Iinkwenkwezi zinokuba zifuna ukuphakama kweefilimi ezilishumi. Iifoto zeenkwenkwezi ze-Bollywood zineefestile zentando yesisa kunye namakhaya kulo lonke ilizwe.
Ukubonelela ngeeyure ezintathu ukuya kwezine zokusinda iinjongo eziphambili ze-Bollywood kwaye yindlela efanelekileyo eyenziwa ngayo. Amafilimu ase-Indiya atyhola ngakumbi nakwihlabathi jikelele ukuze ulinde kwiindawo zokuzonwabisa kunye nevidiyo ezikufutshane nawe.
I-10 ephezulu yeHong Kong Action Flicks
Iifayile ezili-10 eziphezulu zaseJamani
Iipatheni zokuPasa eziMiselweyo kubafundi beNgesi
IDwala & Unqulo lweNdlela
Unyaka wakho weLuckiest? I-Jupiter Return
Ulwakhiwo loLuntu loBukhosi base-Ottoman
I-Antebellum: U-John Brown's Raid kwi-Harpers Ferry